मौद्रिक नीतिः केही यक्ष प्रश्न - Aarthiknews
मौद्रिक नीतिः केही यक्ष प्रश्न
आर्थिक विकास, विनिमय स्थिरता, बचत तथा लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता मुख्य उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को लागि मौद्रिक नीति घोषणाको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ ।
सरकारले आगामी नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटका नीति र कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणलाई त्यसैतर्फ परिलक्षित गर्न मौद्रिक नीति ल्याउने अभ्यासको थालनी भएको आर्थिक वर्ष २०५९/०६० देखि हो ।
समयको माग र आवश्यकताअनुसार वित्तीय नीति परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहितको नीति ल्याउने गर्दछ । तर, यतिका वर्ष भइसक्दा पनि केही आधारभूत प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै छन् ।
के हाम्रो केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र रुपमा मौद्रिक परिचालनको व्यवस्थापन गर्ने हैसियत राख्छ वा यसले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारले दिएको नीतिको सार्वजीकारण गर्ने मात्र हो । नेपालको भारत निर्भर वैदेशिक मुद्रा सटही व्यवस्थापनमा ठीक ढंगले आफ्नो भूमिका निभाउन केन्द्रीय बैंक सक्षम छ ? नेपालको मौद्रिक नीति वास्तबमै नीति हो या राष्ट्र बैंकको निर्णय हो ? यस अलावा अन्य केही प्रश्न पनि छन् ।
के नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेका वास्तविक समस्या पहिचान गरेर मौद्रिक नीति निर्माण गर्न सक्षम छ ? नेपालको केन्द्रीय बैंक यहाँका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सही नियमनको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ ? के हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफाका अलावा अन्य कुरा पनि सोच्छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपेक्षित क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगमा सफलतापूर्वक लगानी गरिरहेका छन् ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृद्धि लगभग शून्य हुँदा समेत बैंकहरुले कसरी अर्बौको नाफा गरिरहेका छन् ?
समुदायको लागि बैंकको अवधारणा कहाँ छ ?
यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको सिधा र सहज जवाफ आजकै मितिमा पाउन सम्भव छैन किनकी सैद्धान्तिक रुपमा लागू भइसकेका तर व्यवहारिक रुपमा सधैं पन्छाइने गरेका विषय र प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित कुरा हुन् यी । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने जबसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र नियामक अंगको रुपमा काम गर्न पाउँदैन तबसम्म यस्ता प्रश्नहरु व्यर्थ छन् । तथापि, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र विश्वका अन्य मुलुकका बैंकिङ संस्था आज के कस्ता बिषयमा विमर्श गरिरहेका छन् भन्ने तुलना गर्ने हो भने नेपाल कुन स्तरमा छ भन्ने चाहिँं स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल भर्सेस ग्लोबल बैंकिङ
नेपालका बैंकहरु अहिले पनि विभिन्न प्रकारका बैंकिङ एवं अन्य कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन् । कुनै पनि बैंकहरु विशिष्टीकरण गरिएका छैनन् । यहाँसम्मकी कृषि विकास बैंकले घरजग्गा कारोबारदेखि कृषिसँग टाढाको समेत साइनो नभएको क्षेत्रमा लगानी गर्छ । तर, विश्वका अन्य मुलुकका बैंकहरु भने अब मुख्य सडकमा शाखा खोलेर व्यापार गर्ने परम्पराबाट निक्कै अगाडि बढिसके ।
हरेक बैंकले आफ्नो लगानी र कारोबारको एउटा क्षेत्र निर्धारण गरेर आफूलाई त्यसैमा सीमित राख्ने र विशिष्टीकरण गर्ने कार्य थालिसकेका छन् ।
नेपालका बैंकहरु ‘बिग मर्जर’को कुरामा अल्झिरहेको बेला उनीहरु ठूला–ठूला वित्तीय निर्णय गर्ने स्तरमा पुगिसकेका छन् । यहाँ हाम्रा बैंकले शाखा विस्तारबाट माथि उठेर शाखारहित सेवालाई आफ्नो अनुपम उपलब्धि बताइरहँदा बाह्य विश्वका बैंकहरु नगद बिहीन कारोबार गरिरहेका छन् । नेपालमा ई–बैंकिङलाई आधुनिक प्रविधिको समय सापेक्ष प्रयोग भनेर व्याख्या भइरहेका बेला अरुतिर ई–मनि (बिट क्वाईन लगायतका भर्चुअल मनि) को प्रयोग भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले समेत यसप्रकारको आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
यहाँ वित्तीय संस्थाको मात्र चर्चा र अवधारणा छ तर उता भने वित्तीय साझेदारमाथिको बहस र अभ्यास शुरु भइसकेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा कम्पनीहरुले सबै बैंकको शाखाको रुपमा काम गरिरहेको अवस्था छ, बाहिरी विश्वमा ।
विश्वका अन्य मुलुकमा भइरहेका अभ्यासलाई यता भित्राउनु अघि हामीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने भन्ने बारे योजना बनाउनु आवश्यक छ । त्यसो त अहिलेसम्म पनि हाम्रो चिन्ता बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी विश्वासनीय बनाउने भन्ने नै हो । हामीले प्राथमिकतामा राखेर सामुदायिक बैंकिङ (कम्युनिटी बैंकिङ), क्रेडिट म्यानेजमेन्ट, इन्टरनेसनल गेटवे म्यानेजमेन्ट आदिमा काम गर्नुपर्ने छ । फेरि पनि नेपालको मौद्रिक नीतिले संविधानले निश्चित गरेको संघीयता र त्यसमा मेलखाने वित्तीय संघीयतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
वित्तीय संघीयता र मौद्रिक नीति
वित्तीय संघीयताले वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारबीच कर, राजस्व र अन्य खर्चहरुको तहगत खर्च अधिकारलाई परिभाषित गर्छ । यसले तल्ला तहका सरकारको वित्तीय भूमिका र जिम्मेवारीलाई आधिकारिक रुपमा वितरण गर्छ । केन्द्रीय सरकारले बृहत् अर्थतन्त्रको (म्याक्रोइकोनोमिक ) स्थायित्व र आयको पुनर्वितरण गर्छ भने स्थानीय सरकारले स्थानीय जनतालाई सुशासन र सेवा प्रदान गर्दछ ।
नेपालका तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो संसदमा घाटा बजेट पेस गर्न नेपालको कानुनले छुट दिएको छ । यस्तो बजेटको घाटा पूर्ति कसरी हुनसक्छ भन्ने स्रोत चाहिँं देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अन्तर–सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रशासनिक खर्चको लागि चाहिँं यस्तो घाटा बजेट प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाएको छ ।
तल्लो तहका सरकारहरुको आर्थिक स्रोतहरु चाहिँं आन्तरिक स्रोतबाट संकलित रकम, राजस्व बाँडफाँडको क्रममा प्राप्त हुने रकम, चार प्रकारका अनुदान, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बचेको रकम र आन्तरिक ऋण हुन् ।
यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो संविधानले चाहिँं केन्द्रीय मौद्रिक नीतिको मात्र परिकल्पना गरेको छ । तर, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । यसो हुँदा मौद्रिक परिचालनको प्रणालीले संघीय वितरणलाई प्रभावित गर्न सक्छ । अनि मौद्रिक नीतिले अन्तरसरकारी वित्त प्रवाहलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ ।
यहाँनेर मनन गर्नैपर्ने कुरा यो हो कि विभिन्न तहका सरकार हुनुको अर्थ त्यस्तै तहगत समस्या पनि देखा पर्नु हो । यसो हुँदा मौद्रिक नीतिले राज्यको राजस्व संकलन गर्न सक्ने क्षमताको पनि अनुमान लगाउनुपर्ने हुन्छ । अनि आन्तरिक ऋणको मात्रा कतिसम्म मात्र हुने भन्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिले व्याख्या गर्नुपर्छ, किनकी यसले संघीय सरकारलाई समेत प्रभाव पार्छ ।
मर्जर कि बिग मर्जर ?
अहिले सञ्चार माध्यममा मर्जरको ठूलो चर्चा छ । तर, मर्जर किन आवश्यक भो भन्ने विषयमा भने खासै बहस चलेको देखिंँदैन । संक्षेपमा भन्ने हो भने मर्जरका लागि नियामक निकायले जोड दिनुका खास कारण छन् । पहिलो, बैंक र वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु । दोस्रो, यस्ता संस्थाहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि गर्नु । तेस्रो पहिलो र दोस्रोको परिणामको रुपमा देखापर्ने आर्थिक (वित्तीय) स्थिरता कायम राख्नु ।
बिग मर्जरले प्रतिस्प्रर्धात्मक सेवालाई भने सुनिश्चित गर्न सक्दैन किनकी सीमित संख्यामा मात्र बैंकहरु रहने हो भने तिनीहरुले आपसी मिलिमतोमा एकाधिकार कायम गर्न सक्छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नै लगानीहरु हुन्छ भन्ने कुराको पनि सुनिश्चितता हुँदैन ।
यसका अलावा बिग मर्जरले ल्याउने अन्य जोखिमहरू पनि छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने स्क्यान्डलहरु जस्तै अन्तर बैंकिङ कारोबार, ब्याजदर फिक्सिङ, गुड फर पेमेन्टको दुरुपयोगको मात्र बढ्न सक्छ । यसरी बैकहरु थोरै भए भने उनीहरुको गठबन्धनले नियामक निकायलाई नै चुनौती दिने सम्भावना एकातिर हुन्छ भने बजारमा सिन्डिकेट खडागरी एकाधिकार कायम गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । यसले बृहत् अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिगार्ने खतरा त छँदैछ । त्यसो त हाम्रो मौद्रिक नीतिलाई कडा र पूर्णतया पालना हुने स्थिति निर्माण गर्ने हो भने बैंकहरु स्वतः मर्जर प्रक्रियामा आउन बाध्य हुन्छन् ।
डा. चिरन्जीवी नेपालले गभर्नरका रुपमा पहिलोपटक मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दा देशले नाकाबन्दी भोगेको कारण सबै आर्थिक सूचकांकहरु नकारात्मक थिए । तर, उनले आव २०७५/०७६ को बजेट पेस गर्दा मुलुकमा तिनै तहका निर्वाचन मात्र सम्पन्न भएको थिएन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । तर, त्यो मौद्रिक नीतिले नेपालको नयाँ संविधानका मर्मलाई अंगिकार गर्न सकेन । सो मौद्रिक नीतिमा धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छाडिएका छन् । अब प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीतिमा गभर्नर नेपालले कुन–कुन कुरालाई सम्बोधन गर्छन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।